क्रोएसिया विश्वकप जित्न सक्ने कारण के-के ? हेर्नुस् – Everest Dainik – News from Nepal
क्रोएसिया विश्वकप जित्न सक्ने कारण के-के ? हेर्नुस्
काठमाडौं, असार ३१ । आज २१औं संस्करण विश्वकप अन्तर्गतको अन्तिम दिन, अर्थात आज उपाधि भिडन्त । ट्रफि प्राप्त तथा नयाँ इतिहास कोर्नका लागि पूर्व विजेता फ्रान्स र पहिलो पटक फाइनल पुग्न सफल क्रोएसिया भिड्ने छन् । खेल नेपाली समय अनुसार साँझ ८ः४५ (पौने ९) बजे हुने छ ।
विश्वकप सुरु भएको बेला तथा त्योभन्दा पहिलो क्रोएसियाले यहाँसम्मको यात्रा गर्ला भन्ने कमैले सोचेका थिए । तर उसले उपाधिका दाबेदार मानिएका ब्राजिल, अर्जेन्टिनालगायत बलिया टिमलाई हराउँदै फाइनलको यात्रा तय गर्यो ।
विश्वकप उपाधिः फ्रान्सले विश्वकप जित्न सक्ने कारण यी हुन्
फ्रान्स र क्रोएसियालाई फाइनलसम्म पुर्याउने १० खेलाडी को-को ?
अहिले क्रोएसियाका समर्थक ह्वात्तै बढेका छन् भने उसले नै यो पटकको उपाधि जित्छ भने आंकलन पनि गरिरहेका छन् । यदि क्रोएसियाले विश्वकप जित्न सक्छ भने कारण केत ? हो त्यहि कारण पनि सार्वजनिक भएका छन् । फिफा डट कमका लागि क्रोएसियाका टिम पत्रकारले क्रोएसिया उपाधि जित्न सक्ने कारण प्रस्तुत गरेका छन्ः
१. एक चामत्कारिक सामूहिकता र उच्च प्रेरणा
क्रोएसियाका प्रशिक्षक ज्लाट्को डालिकले केही उत्कृष्ट काम गरेका छन् । टिमको वातावरण अहिलेजस्तो राम्रो कहिले थिएन, यो खेलाडीले बारम्बार भन्ने गरेको कुरा हो । यो विश्वकपमा उनीहरुले टिममा साँच्चै परिवारको वातावरण पाएका छन् र महसुश गरेका छन् ।
उनीहरु ५२ दिनदेखि साथमा छन् । खेलाडी एकअर्काका लागि मर्न पनि तयार रहेको देखिन्छन्, मैदानमा उनीहरुले देखाएको प्रयास हेर्दा । लगातार तीन खेलमा अतिरिक्त समयसम्म खेल्दा पनि उनीहरुले सामूहिक रुपमा उपल्लोस्तरको जित निकाल्न लालायित देखिन्छन् ।
२. मनोवैज्ञानिक सबलता र आचरण
डेनमार्क, रुस अनि इंग्ल्याण्ड यी तीन देश हुन्, जसले सुरुमा अग्रता लिएर पनि हार बेहोरे । यी तीनै देशसँग सुरुमा पछि परेर पनि जित निकाल्ने टिम हो, क्रोएसिया । डेनमार्क र रुससँगको खेलमा उसले पेनाल्टी सुटआउटमा जित्यो ।
इंग्ल्याण्डसँगको खेलमा भने अतिरिक्त समयको गोलले जित निकाल्न सफल भयो । क्रोएसिया ‘कमव्याक किङ्ग’ को रुपमा उदायो । यसमा खेलाडीको देखाएको मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक सबलताको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
कप्तान लुका मोड्रिकले बारम्बार भन्ने गरेका छन्, ‘हामीले हाम्रो आचरण प्रस्तुत गरेका छौँ ।’ क्रोएसियाको यहि असल आचरण फ्रान्ससँगको फाइनलमा उनीहरुको बलियो हतियार बन्ने देखिन्छ । विश्वकपको इतिहासमा हरेक विश्व विजेता टिमको आचरण उच्च रहेको छ ।
३. अनुभव र आत्मविश्वास
मोड्रिक क्रोएसियाको यो स्वप्न पुस्ताका नेतृत्वकर्ता हुन् । रियल मड्रिडका यी स्टार खेलाडी बाहरे डालिकको टिममा अरु पनि स्टार खेलाडी छन्, जसमा बार्सिलोना, इन्टर मिलान, युभेन्टस र लिभरपुलका खेलाडीहरु इभान रेकिटिक, मारियो मान्जुकी, इभान पेरिसिक, मातेओ कोभाकिक र डिजेन लोभ्रेन पर्छन् ।
टिममा रहेका खेलाडीको औसत आयु २७ वर्ष १० महिना हुन आउँछ, यो टिमसँग धेरै अनुभव छ र त्यो भन्दा ठूलो कुरा आत्मविश्वास छ । टिमका सबैले प्लेइङ्ग लाभेनमा स्थान बनाएका छन् । टिमका सबै खेलाडी आफ्नो क्षमताबारे जानकार छन् । -एजेन्सी
ट्याग्स: CROATIA, Croatia vs France, Fifa world cup 2018